Congratulations नेपालले जित्यो, तिन खेलाडीलाइ रातो कार्ड ! –
Congratulations नेपालले जित्यो, तिन खेलाडीलाइ रातो कार्ड !
February 1, 2022 February 1, 2022 खबर समृद्धLeaveaComment on Congratulations नेपालले जित्यो, तिन खेलाडीलाइ रातो कार्ड !
१८ माघ, काठमाडौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकन राष्ट्र मरिससविरुद्ध लगातार दोस्रो खेलमा जित हात पार्दा तनावपूर्ण बनेको खेलमा तीन खेलाडीले रातो कार्ड पाएका छन् ।दशरथ रंगशालामा सुजल श्रेष्ठको एक मात्र गोलमा १० खेलाडीमा समेटिएको नेपालले ९ खेलाडीमा झरेको मरिससलाई १-० ले हरायो ।
सुजलले खेलको १०औं मिनेटमै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । यसै खेलबाट राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेका नविन गुरुङको कर्नर प्रहार मरिससका खेलाडीले पन्च गरेर गोल हुनबाट जोगाए ।
सोही बललाई नेपालका आशिष लामाले दिएको पासमा पुजन उपरकोटीले ब्याक फ्लिक गर्दै सुजललाई पास मिलाइदिएका थिए । लगत्तै मरिससले बराबरी गर्ने अवसर पाएपनि सफल भएन । नेपालका दिनेश राजवंशीले लिन्सले ब्रेसलाई फाउल गरेपछि पाएको पेनाल्टी नेपालका गोलकिपर किरण चेम्जोङले बचाए ।
१३औं मिनेटमा मरिससका कप्तान एन्डी सोफीको पेनाल्टी प्रहार नेपालका कप्तान चेम्जोङले दाया डाइभ गर्दै बचाएका थिए । मंगलबारको खेलको म्यान अफ दि म्याच चेम्जोङ नै बने । पहिलो हाफमै नेपालले थप गोल गर्ने मौका गुमायो । ३६औं मिनेटमा तेज तामाङले करिब ३० यार्डबाट गरेको प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरिएको थियो ।
यस्तै ३९औं मिनेटमा दर्शन गुरुङले पुजन उपरकोटीको फ्रिकिकमा हानेको हेडर पोष्ट माथिबाट बाहिरिएको थियो ।पहिलो हाफको अन्त्यतिर मरिससले नेपालमाथि दबाव बनाएपनि गोल भने फर्काउन सकेन । यसअघि शनिबार मरिससविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको टिमबाट नेपाली टिममा ६ खेलाडी परिवर्तन गरिएको थियो । पहिलो खेल खेलेका कप्तान किरणसहित दिनेश राजवंशी, देवेन्द्र तामाङ, तेज तामाङ, अन्जन विष्टले भने दुवै खेलमा पहिलो रोजाईमा खेले ।
दोस्रो हाफको शुरुमै मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले डेब्युटान्ट डिफेण्डर नविन गुरुङ र फरवार्ड आशिष लामाको स्थानमा मनिष डाँगी र विमल घर्ती मगरलाई मैदान पठाएका थिए ।
त्यसपछि पुजनले डिफेन्समा झरेर खेले । दोस्रो हाफमा सुरुवातमै मरिससले नेपालमाथि दबाब बनाएको थियो ।५२ औं मिनेटमा मरिससका ब्राभिस रासडारिसिङको कर्नरलाई किरणले पन्च गर्दै गोलको खतरा टारेका थिए । तर त्यसमा कास्टल रोडनीले गोल गर्ने अवसर गुमाए । ६२औं मिनेटमा नेपालका मनिष डाँगीले गोल गर्ने अवसर गुमाए । यस्तै ६८औं मिनेटमा मरिससका कप्तान एन्डी सोफीको प्रहार नेपालका गोलकिपर किरण चेम्जोङले पन्च गर्दै बचाए ।
दोस्रो हाफमा तनाव, तीन खेलाडीलाई रातो कार्ड – दोस्रो हाफ तनावपूर्ण बन्दा मरिससका दुई र नेपालका एक खेलाडीले रातो कार्ड पाए । ७१औं मिनेटमा मैदानमा खेलाडीबीच हात हालाहाल भएपछि मरिससका एड्रिएन बट्लर र नेपालका पुजन उपरकोटीले रातो कार्ड पाए ।
यस्तै ८०औं मिनेटमा मरिससका एमानुएल फुलचन्दले पनि रातो कार्ड पाए । अन्तिम दश मिनेट मरिसस ९ खेलाडीमा समेटिएर खेल्दा नेपालले पनि दश खेलाडीमा रहेर खेलेको थियो । नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले खेलमा तनाव हुनु दुखद भन्दै यसलाई बिर्सनुपर्ने बताए । ‘टेन्सनका लागि दुव‌ै टिमका खेलाडी ५०-५० प्रतिशत जिम्मेवार छन् ।
गेम सकियो, अब त्यो सबै कुरा बिर्सनुपर्छ । म रेफ्रीको निर्णयको सम्मान गर्छु’ उनले भने । मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले आफूले दुबै खेल जित्ने योजनाअनुसार सफल भएको बताए । ‘आज खेलाडीले नडराई खेले । यस जितबाट फिफा वरियताका लागि १० अंक जोड्न सफल भयौं । यो हाम्रा लागि राम्रो हो’ उनले भने ।
मरिससका प्रशिक्षक टोनी फ्रान्कोइसले तनाव हुनुमा रेफ्रीको दोष भएको संकेत गरे । यद्यपि उनले रेफ्रीबारे आफू टिप्पणी नगर्ने भन्दै कुटनीतिक जवाफ दिए । ‘यो मैत्रीपूर्ण खेल हो । रेफ्रीको विषयमा बोल्न मन लाग्द‌ैन र मेरो खेलाडीको जिम्मा मैले लिनुपर्छ । मैत्रीपूर्ण खेल भए पनि हरेक टोलीले जित्न चाहन्छ’ उनले भने ।
शनिबार भएको खेलमा आफ्ना खेलाडी केही डराए पनि आजको खेलमा सुधार गरेको प्रशिक्षक फ्रान्कोइसले बताए । ‘हामीले राम्रो फुटबल खेल्यौं, केही अवसर पायौं तर गोल गर्न सकेनौं । हामीलाई जित्ने अवसर थियो तर स्कोर भएन’ उनले भने ।
खेलको अन्तिम समयमा फ्लड लाइटको बत्ती पूरा नबल्दा खेल १० मिनेट रोकिएको थियो ।त्ययसपछि ८ मिनेटको ईन्जुरी समय थप खेलाइएको थियो । इन्जुरी टाइममा अञ्जन विष्टले पेनाल्टी बक्सबाट गरेको प्रहार मरिससका गोलकिपर मिचेलले बचाए । अनलाइन खवरको सहयोगमा।
बुबाको मृ’त्युपछि छोराको बिजोक, भारत कमाउन गएका गुल्मीका सुर्यवंशी जलेर प्राण माग्दै हेर्नुहोस्।
दुई हप्ता नपुग्दै फेरि बढ्यो पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य
कुशल भुर्तेलले बनाए लगातार तीन खेलमा अर्धशतक, दोस्रो स्थानमा कुशल
April 20, 2021 April 20, 2021 खबर समृद्ध
भारतसँग नेपालको बराबरी हेर्नुहोस्।
September 2, 2021 September 2, 2021 खबर समृद्ध
नेपालसँगको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा भारत २–१ ले विजयी
September 5, 2021 September 5, 2021 खबर समृद्ध